बामदेवलाई चुनावमा हराउने केपी ओली नै हुन्, मलाई पनि हराउन खोजेका थिए : नेता नेपाल - Sawal Nepal
बामदेवलाई चुनावमा हराउने केपी ओली नै हुन्, मलाई पनि हराउन खोजेका थिए : नेता नेपाल
काठमाडाैं सवाल नेपाल २०७७ चैत्र २२, १५:२०
काठमाडौं, २२ चैत । नेकपा एमालेबाट वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि केपी ओलीले प्रचण्डलाई लात्ताले हानेर फालेको बताएका छन् ।
काठमाडौं जिल्लाको समानान्तर कमिटी गठन भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले आफूलाई प्रचण्डको मामुली कार्यकर्ता भनेकोमा ओलीप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । हिजो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्न ओलीले प्रचण्डको चाकरी गरेको आरोप नेपालले लगाए । उनले भने, ‘के हिजो प्रचण्डको कार्यकर्ता थिए ओली ? आफू पदमा पुग्न चाकरी गरेको होइन ? स्वार्थ पूरा भएपछि प्रचण्डलाई किक हानेर फाल्ने व्यक्तिलाई अध्यक्षको रुपमा टाउकोमा राख्न अभिशप्त भएका छौं ।’
गत आम निर्वाचनमा ओलीले आफूलाई काठमाडौंबाट चुनाव हराउन खोजेको र वामदेवलाई पराजित गरेको आरोप समेत नेपालले लगाए ।
‘काठमाडौंको २ नम्बर क्षेत्रमा उम्मेदवार हुँदाखेरी केपी ओलीका मान्छेले मलाई चुनाव हराउन खोजेका थिए । मलाई हराउनका लागि मेरो सामुन्ने नै प्रयत्न गरेका थि ए। आफ्नो पक्षको उम्मेदवारका पक्षमा पर्चा बाढ्दै र भोटमाग्दै हिँडेका थिए । माधव नेपालको त नामैले, अनुहारले नै भोट आइहाल्छ नि किन बाड्नु पर्यो पर्चा, किन माग्नु पर्यो भोट भन्थे’, नेपालले भने ।
उनले वामदेव गौतम पनि पार्टीभित्रकै अन्तविरोधका कारण चुनाव हारेको र ओली पक्षले नै हराएको दावी गरे । ‘वामदेव गौतम त्यही कारणले हार्नुभएको हो, हराइएको हो थाहा छ तपाईंहरुलाई’, नेपालले भने, ‘विभिन्न व्यक्तिहरुलाई विभिन्न ठाउँमा हराउनका लागि उहाँले भूमिका खेल्नुभयो । त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा पहिला जो प्रधानमन्त्रीको प्रत्यासी हुन्छ त्यसको पत्तासाफ गरिदिने योजनामा उतिबेलैदेखि लाग्नुभएको थियो ।’